VaTsvangirai Vokurudzira EU neUN Kuti Dzisacherechedze Vamiriri veZimbabwe Vakadomwa naVaMugabe
Mutungamiri wehurumende, uye vari mutungamiri werimwe bato reMDC, VaMorgan Tsvangirai, vasangana nevamiriri vedzimwe nyika muZimbabwe, vachivapira nezvetsamba dzavakanyorera nyika dzakasiyana-siyana nemasangano akasiyana siyana, vachinyunyuta nezvedanho rakatorwa nemutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, rekudoma vamiriri veZimbabwe kune dzimwe nyika vasina kusumawo vamwe vavo muhurumende yemubatanidzwa.
VaTsvangirai vari kuda kuti nyika idzi dzisacherechedze vamiriri ava, sezvo vakadomwa zviri kunze kwechibvumirano cheGlobal Political Agreement, (GPA), icho chakaumba hurumende yemushandira pamwe.
VaMugabe vakadoma vamiriri vanoti VaPhelekezela Mphoko - South Africa; VaJames Manzou - United Nations kuGeneva; Mary Mubi - Italy; VaSteven Chiketa - Sweden; VaChitsaka Chipaziwa - Unted Nations muNew York; Margaret Muchada, kuEuropean Communities. VaMugabe vakadomawo zvakare magavhuna gumi pamwe nemukuru wemapurisa vasina kunge vasumawo vamwe vavo.
Mutungamiri weSouth Africa, uye vari mutongi gava pagakava reZimbabwe, VaJacob Zuma, vanonzi vari kutarisirwa kutumira nhumwa dzavo kuZimbabwe neChitatu kuti dzione nezvenyaya iyi.
Gurukota rinoshandira muhofisi yaVaTsvangirai, VaJameson Timba, vaudza Studio7 kuti VaTsvangirai vari kuda kuti VaMugabe vasiyane netsika yavo yekungoita madiro ajojina.
Mumiriri weEuropean Union muZimbabwe, VaAldo Dell’ariccia, vatenda kuti ichokwadi kuti vakatambira tsamba yaVaTsvangirai, uye vakabva vangoitumira kumuzinda wavo kuBrussels neMuvhuro wakare.
VaDell’ariccia vatiwo hurukuro pakati peZimbabwe nesangano reEuropean Union dzekuti vatange kudyidzana zvakare, dzakaringana nezviri muchibvumirano cheGPA. Vati sangano ravo richaongororawo nyaya iyi zvakasimba risati ratora matanho.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika, uye vari Programs Manager veCrisis in Zimbabwe Coalition, VaPedzisai Ruhanya, vaudzawo Studio7 kuti nyika idzi dzinofanirwa kutambira kurudziro yaVaTsvangirai kana dzichiti dzinotevera zviri muchibvumirano cheGPA.
Ukuwo, VaTsvangirai vati havasi kuenda kudare remakurukota, senzira yekuratidza kunyunyuta kwavo nehumbimbindoga hwaVaMugabe.
Hurukuro naVaJameson Timba
Hurukuro naVaAldo Dell'ariccia